यस्ता छन् साना उद्यमीका चुनति र अवसर:: Artha Dabali
यस्ता छन् साना उद्यमीका चुनति र अवसर
पूर्णशोभा चित्रकार, उद्यमी
सरकारले चालू बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा महिला सशक्तिकरणका विभिन्न व्यवस्था गरेको छ । बजेटले महिला उद्यमशीलताको विकास गर्न विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको सरकारको दावी छ ।
महिलाहरूबाट प्रवर्धन हुने साना व्यवसाय र स्वरोजगार कार्यक्रमका लागि पुँजी, सीप र उद्यमशीलता तालिम सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था पनि बजेटमा गरिएको छ । तर यस्ता साना मसिना कार्यक्रमले महिला सशक्तिकरणमा प्रभावकारी टेवा नपुग्ने सरोकारवालाहरु वताउँछन् ।
महिला उद्यमशीलता विकास गरी उनीहरुबाट संचालन हुने परियोजनामा आधारित १५ लाख रुपैयाँसम्मको सामूहिक ऋणमा ६ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था बजेटले गरेको छ । त्यस्तै राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमलाई विस्तार गर्ने पनि बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
तर, महिलाहरूको समग्र रोजगारदेखि सवलीकरण, विकासको मुलप्रवाहमा महिलाको सहभागितालाई भने वेवास्ता गरिएको छ ।
उद्यमशीलतामा लागेका महिलाहरु सरकारले साना ठूला सबै प्रकारका उद्योगमा एकैखाले नीति तथा व्यवस्था गर्नाले साना उद्यामीहरु निरुत्साही हुने अवस्था आएको उद्यमी महिलाको गुनासो गर्छन् । जसको कारण भर्खरै उद्यमशिलतामा लागेका महिला पलायन हुने अवस्था आएको छ ।
प्रस्तुत छ साना उद्यमी महिलाका अहिलेका अवस्था र समस्याका विषयमा उद्यमी पूर्णशोभा चित्रकारसंग अर्थडवलीको लागि तारा वाग्लेले गरेको कुराकानीको सार :
तपाँइले विगत ४ वर्षदेखि आफ्नै प्रयासमा महिलालाई सिलाइबुनाइको तालिम दिएर रोजगारी समेत उपलब्ध गराउदै आउनु भएको छ । एकल प्रयासमा महिलालाई सिपमूलक तालिम र रोजगारी दिने सोच कसरी आयो ?
महिलालाई आर्थिक रुपले संपन्न बनाउन र मात्र महिला सशक्तिकरण गर्न पहिले त आत्मनिर्भरताका कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । साथै महिलालाई स्वरोजगार बनाउन विभिन्न सिप दिनुपर्छ । सिप सिकेका महिलाले मात्र आत्मनिर्भरताको लागि आय आर्जन गर्ने सक्ने हुन्छन् । त्यसैले मैले पनि महिलाई उद्यमशिलतामा अग्रसर गराउन पहिले सिपयुत्त बनाउनुपर्छ भनेर सिलाइबुनाइको तालिम दिने व्यवस्था मिलाएकी हुँ । यहाबाट तालिम लिएका महिलाले यहीँ बसेर उनका कपडा बुन्छन । मैले उनीहरुले बुनेका कपडा बजारसम्म पुर्यादिन्छु ।
हालसम्म कतिजना महिलाले तालिम लिएर यहीँ बसी बसी आर्य आर्जन गर्ने अवसर पाए ?
उनीहरुले जती काम गर्छन सोही अनुरुपको आय आर्जन गर्छन । हालसम्म ६६ जनाले तालिम लिएर कपडा बुनेर आत्मनिर्भर भएका छन् । कतिपय विभिन्न व्यत्तिगत तथा पारिवारिका समस्याले निरन्तरता दिन सकेका छैनन् । जतीले काम गरेका छन ति सबै उत्साहित नै छन् । ऊनका कपडा बुन्ने हुँदा मेहनत पनि धेरै नै गर्नुपर्छ आम्दानी पनि राम्रै हुन्छ । यहाँबाट उत्पादित सामान पर्यटकले रुचाउँछन् । विदेश सम्म यसको बजार छ ।
यस क्रममा महिला उद्यमी तथा कामदारका कस्ता चुनौति रहेको पाउनुभयो ?
जुनसुकै काममा लागेका महिलाले पनि आफ्नो पेशा र व्यवसायको शिलसिलामा धेरै नै चुनौतिको सामना गर्नुपर्छ । हाम्रो सामाजिक संरचनाले महिलाले दोहोरो जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्छ । पारिवारिक दायित्व पूरा गरेर कार्यक्षेत्रमा खटिने अवस्था सम्म महिलाले हरेक चरणमा समस्यासंग जुध्नुपर्छ ।
जसको कारण कतिपय अवस्थामा व्यवसायीका कामलाई निरन्तरता दिन कठिन हुन्छ । उद्याशिलतामा लागेका महिलले भोग्ने समस्या र चुनौति पनि त्यही हो । यहाँ आएर सलाई बुनाइको काम गर्ने महिलले पनि यस्तै समस्याले गर्दा कामलाई निरन्तरता दिन सकेका छैनन् । कतिपय महिला त घरेलु हिंसामा परेकाले काम गर्न पाएका छैनन् ।
महिलालाई उद्याशिताको क्षेत्रमा टिकाइराख्न र उनीहरुले गरेको व्यवसाय प्रर्वद्धन गर्न के गर्नुपर्ला जस्तो लाग्छ ?
महिला उद्यमशिलता प्रवद्र्धन गर्न सरकारले विभिन्न आकर्षक कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ । अहिले सरकारले साना उद्यमीलाई प्रमोट गर्ने भन्दा पनि निरुत्साही कनाउने कार्यक्रम ल्याएको छ । साना साना व्यापारी र व्यवसायीले पनि पानमा कारोवार गर्ने व्यवस्थाले साना उद्यमीलाई समस्यामा पारेको छ । सरकारले साना र ठूला व्यवसायीलाई एउटै नीतिगत व्यवस्था गर्दा साना व्यवसायी मर्कामा पर्ने हुँदा सरकारले उद्यमीलाई दक्ष र सक्षम बनाउन विभिन्न कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।
भर्खरै उद्यमशीलतामा लागेका व्यासायीलाई के सन्देश दिनुहुन्छ ?
अहिलेको युग प्रतिस्पर्धाको युग हो । हरेक क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा छ । प्रतिस्पर्धा हुनु पनि पर्छ, अनिमात्र व्यवसायीक क्षेत्रमा गुणत्मकता आउन सक्छ । आफ्नो पेशा व्यवसायलाई प्रतिस्पर्धी र गुणस्तरिय बनाउन पहिले त महिलाले आफ्नो क्षमता विकास गर्नुपर्छ । शिक्षामा महिालाको पहुँच बढाउनुपर्छ ।
आत्मनिर्भरता र स्वरोजगारका विभिन्न कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । शिक्षा र सीप भएमा मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न सकिने हुँदा आफ्नो क्षमतामा निखार ल्याउनु पर्छ ।